မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ဘဝအခြေအနေနောက် ရေစုန်မျောလိုက်တာ ဖြေရှင်းနည်းလား
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ အခက်အခဲ– မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေများ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ အခက်အခဲ– လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ များလွန်းနေ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ အခက်အခဲ– အပျက်သဘောခံစားချက်များ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ဘဝအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသလား
သူတို့မြေ၊ သူတို့ဓလေ့ မွန်ဂိုလီးယားသို့ အလည်တစ်ခေါက်
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲတဲ့အခါ
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား မိကျောင်းမေးရိုး
ဝမ်းနည်းနေတဲ့ ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ရမလဲ
သင်ခန်းစာ ၄– ခိုးတာမကောင်းဘူး
နိုးလော့! | ဇူလိုင် ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီကာအွန်ဒီ ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တော့ခ် ပီဆင်း တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဗီယက်နမ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက်ဆီဒိုးနီးယား မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဗာလီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
ဘဝအခြေအနေနောက် ရေစုန်မျောလိုက်တာ ဖြေရှင်းနည်းလား
လူငယ်ဘဝတုန်းက ဘယ်လိုပန်းတိုင်မျိုးရှိခဲ့သလဲ။ အိမ်ထောင်ပြုမယ်၊ ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်အောင် လုပ်မယ်၊ အလုပ်ကောင်းကောင်းရှာမယ်လို့ ရည်မှန်းထားခဲ့နိုင်တယ်။ ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း အမြဲတော့ဖြစ်မလာဘူး။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရည်မှန်းချက်ပျက်သွားနိုင်တယ်။ အန်ယာ၊ ဒယ်လီနာ၊ ဂရယ်ဂရီတို့ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
အန်ယာဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံကဖြစ်ပြီး အသက် ၂၁ နှစ်မှာ ကင်ဆာရောဂါရှိလာတာကြောင့် အခုဆိုရင် အိမ်ထဲမှာပဲ ခြေချုပ်မိနေတယ်။
ဒယ်လီနာကတော့ အမေရိကန်ကဖြစ်ပြီး အာရုံကြောနဲ့ကြွက်သား ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ အစ်ကိုသုံးယောက်ကိုလည်း ကြည့်ရှုပေးနေရတယ်။
ဂရယ်ဂရီက ကနေဒါကဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားနေရသူဖြစ်တယ်။
အန်ယာ၊ ဒယ်လီနာနဲ့ ဂရယ်ဂရီတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝအခြေအနေနဲ့ အလိုက်သင့် နေနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲ။
‘သင်က ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျရင် အားလျော့သွားလိမ့်မယ်’ ဆိုပြီး သမ္မာကျမ်းစာက ဆိုတယ်။ (သုတ္တံ ၂၄:၁၀၊ ကဘ) စိတ်သဘောထားအပေါ် အများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာကို အပျက်သဘောမြင်တဲ့သူတွေဟာ မပျော်ကြဘူး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေလည်း မချနိုင်ကြဘူး။ အပြုသဘောရှိသူတွေကတော့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြတယ်။
အန်ယာ၊ ဒယ်လီနာ၊ ဂရယ်ဂရီတို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။
ဇူလိုင် ၂၀၁၅ | ဘဝအခြေအနေနောက် ရေစုန်မျောလိုက်တာ ဖြေရှင်းနည်းလား
နိုးလော့! ဇူလိုင် ၂၀၁၅ | ဘဝအခြေအနေနောက် ရေစုန်မျောလိုက်တာ ဖြေရှင်းနည်းလား